Sida loo dar Sound Raadka in Video
> Resource > Video > Sida loo dar Sound Raadka in Video
Saamaynta Sound ka dhigi kartaa goobta video ah u xiiso badan. Haddii aad rabto in aad ku darto saamaynta dhawaaqa gaarka ah video, Wondershare Filmora (asal ahaan Wondershare Video Editor) waxay noqon kartaa doorasho wanaagsan. Tani tafatirka software video la siiyayba maktabad yar oo codad aasaasi ah oo aad si fudud u isticmaali kartaa in aad video. Just jiidi saamayn aad rabto in aad waqtiga iyo inayna track ku wareegsan ilaa ay haboon goobta.
1 dejinta file video ah
Ku rakib oo ay maamulaan editor video this. Markaas riix "Import" button ku darto faylka video asalka barnaamijka. Ama si toos ah jiidi oo hoos u faylka si uu furmo suuqa hoose.
2 Ku dar saamaynta dhawaaq si loo video ah
Jiid oo hoos u file video ah in waqtiga Video ah. Markaas riix "Sound" button oo uu furmo suuqa muuqata, aad arki doonaa sanduuq taxay codad kala duwan. Just xulo saamayn dhawaaq aad rabto, sida "Alarm", "Bell", "Car" ECT. iyo riix "Play" badhanka si ay u maqlaan.
Si aad ku dari saamaynta dhawaaq si loo Timeline ah, doortaan saamayn dhawaaq aad rabto in aad ka, qaban mouse iyo hoos u jiidi saamaynta dhawaaq si loo wadada dhawaaqa ka hooseeya video clip ah. Markaas saamaynta dhawaaqa waxaa lagu dari doonaa sida track cusub audio clip aad.
Ka dib markii in, guuraan icon dhawaaqa in Timeline ah in ay bilowga ah clip saamayn audio dhawaaqa iyo dhaqaaqo playhead in ay hal dhibic ka ee wadada audio u deji waqtiga ku dhamaaday. Riix "Play" badhanka si loo arko haddii aad video si fiican u ciyaaro la saamayn codka hadalkiisa raaciyay.
Waxa kale oo aad edit karaa saameynta audio. Si aad u samayn, kaliya laba jibaar guji saamayn dhawaaqa iyo toosiyo "Speed", "Volume", "libdhi ee" iyo "libdhi baxay" saamaynta sida aad jeceshahay. Haddii aad rabto in aad ka saarto saamaynta dhawaaqa, guji clip audio si ay u muujiyo iyo riix "Delete" muhiimka ah ee aad keyboard.
3 dhoofinta file cusub
Sii video dib u eegis kama dambays ah si aad u aragto haddii ay jiraan siyaabo kale oo loo hore mariyo. Marka aad ku qanacsan tahay natiijada, waxaa la gaaray waqtigii ay u dhoofiyaan shaqadaada. Guji ee "Samee" button, beddelaan si ay "Qaabka" tab iyo sheeg meesha iyo qaab u badbaadin. Waxa kale oo aad dooran kartaa in aad u badbaadin inuu ciyaaro qalab kala duwan sida iPhone, iPad, iPod, Zune, Madaxweyne Siilaanyo ama si toos ah u geliyaan in YouTube ama Facebook. Waa maxay ka badan, xitaa waxaa aad u gubi karaan si ay u ciyaaro DVD DVD guriga ciyaaryahanka.
Oo walaacsan Software: Samee walaacsan Video
Sida loo yareeyo awoodda MOV
Top 5 4K Players Video
Sida loo Beddelaan MKV in DivX
Sidee si ay u xumeeyaan wejiga ku Video
Sida loo Kordhi dhalaalka of Video
Sida loo Beddelaan Rhapsody in MP3